न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ । कोरोना महामारीकाबीच यस वर्ष भक्तपुरको मध्यपुर थिमिमा धुमधामका साथ सिन्दूर जात्रा मनाइएको छ । मध्यपुर थिमिमा बिस्का जात्राको अवसर पारेर ३२ खटसहितको सिन्दूर जात्रा मनाइने
मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । जनआन्दोलन २०६२/२०६३ मा बनेपामा प्रहरीको गोली लागि घाईते भएका जिउँदो शहिद मुकेश कायस्थलाई नेपाल सरकारले लोकतन्त्रका योद्धा, अभिलेखीकरण तथा सम्मान समिति मार्फत सम्मान गरेको छ ।
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौ । पहिलो मात्रा कोरोना बिरुद्धको खोप लगाई सकेका नागरिकहरुको लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दोस्रो मात्रा खोप लगाउँनका लागि २०७८ बैशाख ७ गते देखि ११ गते
यस्तो देखियो आजबाट शुरु भएकाे भक्तपुरको बिस्का जात्रा (फोटो फिचर)
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्वको भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्का ९बिस्केट० जात्रा आजबाट शुरु भएको छ। जात्राको मुख्य आकर्षण नै रथ तानातान गर्नु हो । यसरी तानातान गर्ने
न्युज अफ नेपाल, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमणबाट जोगिन घरमै तातो पानीको बाफ लिने, नुन, पानीले कुल्ला गर्ने बानी बसाल्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीबार नेपाल चेम्बर अफ
– डा. राजेन्द्र भद्रा म ३५ वर्षको भएँ र श्रीमान् ४२ वर्ष । उहाँ निकै मोटो हुनुहुन्छ, मदिरा र धूमपान पनि गर्नुहुन्छ । पहिले तत्काल सन्तान नजन्ममाउने निर्णय गरेकोमा अहिले
– प्रा. डा. प्रकाशराज रेग्मी (मुटुरोग विशेषज्ञ) मुटु शरीर चलाउने यन्त्र मात्रै होइन, यसका केही दार्शनिक पक्षहरु पनि छन् । मुटुले गर्ने काम, यसलाई लाग्ने रोग, बच्ने उपायहरु अनि यसका
करिब तीन दशकदेखि स्वास्थ्य विषयमा सञ्चारमाध्यममा निरन्तर कलम चलाउने जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. अरुणा उप्रेती मूलतः जनस्वास्थ्य, महिला अधिकार र पोषणको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ । जनस्वास्थ्य विशेषज्ञका रुपमा उहाँले नेपालका धेरै
हिमाल जिसी, काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाललाई तपाईले कसरी प्रयोग गर्नु हुन्छ सोही अनुरुप परिणाम पनि आउँछ यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तपाइँलाई अचम्म लाग्न सक्छ कि सामाजिक सञ्जालले
काठमाडौँ । मानव शरीरमा १०७ वटा जीवितीय विन्दु हुन्छ । ती विन्दुमा आघात पर्दा मानिसको निधनसमेत हुनसक्ने भएकाले यस विषयमा जानकारी गराउन तीन दिने मर्म चिकित्सासम्बन्धी तालिम शुरु भएको छ
– डा. अरुणा उप्रेती (जनस्वास्थ्य विज्ञ) अचेलका आमाबाबुले बालबालिकलाई मोबाइलमा गीत तथा भिडियो हेराउँदै खाना ख्वाउने गर्छन् । यो बानीको रुपमा विकास हुन्छ, अनि मोबाइल नभई बच्चाले खानै मान्दैन ।
कसैको सामुन्ने पर्दा सर्वप्रथम तपाईँको कुन अंगबाट अर्को व्यक्ति बढी प्रभावित हुन्छ होला, विचार गर्नु भएको छ ? कसैले स्टाइलिष्ट हेयरले, कसैले चंचले आँखाले, कसैले पंक्ति मिलेका दाँत त कसैले
राजनीतिक अराजकताबाट गुज्रेको नेपालको राजनीति प्रभावबाट उन्मुक्त भईरहेको समयमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. नेपालको सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पद प्रधान न्यायाधीशमा पुग्ने अवसर प्राप्त गरेका थिए । उनको आगमन सहज
कपिल काफ्ले, काठमाडौं । संविधानभन्दा माथि उक्लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आम नागरिकको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने धृष्टता गरेका कारण मात्र उहाँ देशको कार्यकारी प्रमुख हुन